China Semi-oluzenzekelayo Ukubumbela Line mveliso kunye nabathengisi Sofiq
Semi-oluzenzekelayo Ukubumbela Line sisixhobo efanelekileyo kwimveliso ubunzima mveliso Foundry. Izinto eziluncedo kuzo lutyalo-mali oluncinci, ukubuya ngokukhawuleza, ukunciphisa amandla emisebenzi, ukuphakamisa umgangatho wobunjani, ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa.
Semi-oluzenzekelayo Ukubumbela Line sisixhobo efanelekileyo kwimveliso ubunzima mveliso Foundry. Izibonelelo zalo kukutyalomali oluncinci, ukubuyisa ngokukhawuleza, ukunciphisa amandla emisebenzi, ukuphakamisa umgangatho wobunjani, ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa.
Uhlobo umgca umgca yokubumba amkele joet-Cudisa umatshini yokubumba, ukuhambisa yokuhambisa transfer ekubunjweni ngumngundo kuqhubeka ngokugalela epholileyo. Umsebenzi uphethe iflask kunye nesikhunta sentlabathi ngokuxhoma umoya, kunye nokuzaliswa okungundoqo, iflask yomdlalo, kunye nokugalela njl.njl.
Ukuqanjwa kwezixhobo eziphambili zezi zilandelayo:
Semi-oluzenzekelayo Ukubumbela Line (ngokobungakanani iflask).
Iindlela ezimbini zomoya zixhoma.
Ukugcina uloliwe wesangqa, iLadle njl.
Umatshini wesanti wokuwa.
Buyisela iflask roller umatshini wokuhambisa.
I-Flask (udonga olunye, izinto ze-ductile iron).
Lo matshini, izixhobo ezidityanisiweyo zenzelwe umgca wokubumba, yenza inkqubo eyahlukileyo enjengokubumba, ukuzalisa okungundoqo, ukuphosa, ukugungqa i-flask kudityaniswe kunye ukwenza umgca wokubumba osondeleyo. Isixhobo esifanelekileyo sokuqonda ukusetyenziswa koomatshini kunye nokuzenzekelayo. Ngokubanzi, iyaqhubeka ngokucekethekileyo, kodwa inokuba ngumqadi wokuhamba isitayile nayo njengemfuneko. Yonke ubude kunye nokuyilwa kuxhomekeke ekubunjweni kweenkcukacha kunye neemeko zocweyo.
Ukucaciswa Of iimilo-oluzenzekelayo Line Ukubumbela
Ngama-800 * 500
I-1000 * 650
Egqithileyo Okubonisa-Ngokuzenzekelayo Ukugalela Umatshini
Okulandelayo: Uxinzelelo lweStatic Molding Line
Esingxobeni Ukubumbela, Flask zomngundo Machine, Umatshini wokukroba ngaphandle, Semi-oluzenzekelayo Umatshini Ukubumbela, Ibhokisi yesanti, Ukubumba Ivoti Flask,